Mashruuc lagu caawino dadka uu cudurka aydhisku hayo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mashruuc lagu caawino dadka uu cudurka aydhisku hayo
La daabacay tisdag 9 december 2014 kl 14.12
Ololaha lagu caawinayo dadka uu cudurka aydhisku hayo
Ololaha Musikhjälpen.Foto: SR
- Si fiican baanu u maamulnay lacagtii aanu ururinay, waxaanay ku baxday meel wanaagsan. Waxa aanu xarun caafimaad oo dumarku ku umulaan ka furnay waddanka Hayti, waxaana xaruntaasi caafimaad gacanta ku haya ururka dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn, waxaanu lagu caawiyaa dumarka dhibaataysan, sidoo kale waxaanu waddanka Itoobiya tababarnay umulisooyin. Kaasi waxa uu ahaa Per Byman oo ah xoghayaha guud ee Mashruuca Musikhjälpen.
Musikhjälpen waa mashruuc ay iska kaashanayaan raadiyowga Iswiidhan, Telefiishanka Iswiidhan iyo Radiohjälpen. Mashruucan ayaa ah mid lacag loogu ururiyo dadka baahan ama dhibaataysan ee ku nool dunida daafaheeda. Sannadkan 2014, waxa uu mashruucani ka qabsoomi doonaa magaalada Uppsala, iyada oo si toos ah looga soo tabin doono idaacadda P3, SVT Play iyo waliba tiifiiga SVT1. Mashruucan ayaa la qabtaa sannad kasta, mawduucii sannadkii hore waxa uu ku saabsanaa xuquuqda dumarka dumarku leeyihiin marka ay uurka leeyihiin, lacagtii sannadkii hore la ururiyayna waxa ay dhammayd 28 milyan oo karoon, taasi oo ku baxday 22 mashruuc oo laga fuliyay 17 dal. Mawduuca sannadkan diiradda la saarayaa waa sidii loo caawin lahaa dadka la ildaran cudurka aydhiska iyo sidii dadka looga digi lahaa khatarta uu leeyahay cudurkan dilaaga ahi.
Cudurka aydhiska ayaa faro baas ku haya dunida, waxaana maanta cudurkaasi qaba 35 milyan oo qof oo adduunka dacaladiisa ku nool. 70% ka mid ah dadkaasi waxa ay ku nool yihiin Afrika, gaar ahaan waddamada ku yaalla koonfurta saxaaraha. Sida waddamada Koonfur Afrika, Nayjeeriya, Muusambiig iyo Tansaaniya. Sidoo kale waxa uu cudurkani farobaas ku hayaa waddamada Indiya, Shiinaha, Ruushka, Baraasiil iyo waddanka Hayti. Waddan Sweden waxa uu cudurkani sannadkii ku dhacaa qiyaastii 450 qof. Faqriga, jahliga iyo adeegyada caafimaadka oo liita ayaa keenay in uu cudurkani si weyn u faafo. Dad badan ayaan wax aqoon ah u lahayn waxa uu cudurkani yahay, siyaabaha uu u faafo iyo waliba sida looga hortagi karo. Dumarka ayaa u badan dadka uu xanuunkani ku dhaco, taasna waxa sabab u ah dumarka oo inta badan la kufsado iyo iyada oo lacag ama cunto la siiyo si jidhkooda uga ganacsadaan.
Cudurkan dilaaga ah ee aydhis ayaa sidoo kale lagu kala qaadaa siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin, galmada, irbadaha laysku mudo ama duro, dhiiga dadka loo kala shubo, hooyada oo ilmaheeda cudurka u gudbisa inta uu caloosha ku jiro iyo waliba naasnuujinta. Laga soo bilaabo 1986 waxa cudurkan u dhimatay 36 milyan oo qof, halka sannadkii hore ay 4000 oo qof u dhinteen maalintiiba.
Ilaa hadda wax dawo ah looma helin xanuunkan, laakiinse waxa uu qofka uu cudurkani ku dhacay heli karaa daryeel u sahlaya in uu xanuunkan saaxiib la noqdo oo uu sii noolaado. Shantii qof ee cudurkani uu hayo saddex ka mid ahi ma helaan wax dawo ah, iyada oo ay ugu wacan yihiin dhaqaalexumo ama iyaga oo ka fog meel ay ku taallo xarun caafimaad oo ay daryeel ka helaan. Sweden waxa ku nool 6500 qof oo qaba cudurka aydhiska, 90% dadkaasi ka mid ahi waxa ay helaan daryeel caafimaad oo wanaagsan. Halka ay waddanka Nayjeera 20% helaan daryeel caafimaad.
Dr Maxamed Yuusuf Xasan waa dhakhtar ku takhasusay cudurada guud, waxaanu ka hawlgalaa xarunta caafimaadka Falista ee deegaanka Märsta. Waa kan isaga oo sharaxaya astaamaha lagu garto cudurka aydhiska.
In ka badan saddex milyan oo carruur ah ayaa uu maanta cudurkan la ildaran, carruurtan ayaa ah kuwo cudurkani ku dhacay intii ay ku jireen uurka, qaar cudurkani ku dhacay wakhtigii umusha iyo waliba kuwo uu cudurkani u gudbay wakhtigii naasnuujinta. Carruurtan ayaa haddii aanay daawayn helay waxa ay inta badan halis u yihiin in ay dhintaan inta ayna da’doodu gaadhin laba jir.
Mar kale Dr Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in ay jiran dad badan oo yimaadda xarumaha caafimaadka si ay isaga baadhaan cudurkan.
Cudurkani HIV-aydhis, waxa uu maalin kasta ku dhacaa 6000 qof, taasi oo ka dhigan in uu shan iyo tobankii ilbidhiqsiba ku dhaco hal qof. Dad badan oo uu cudurkani hayo ayaan ku dhiirran in ay qirtaan oo ay ka sheekeeyaan xanuunkani dilaaga ah, iyaga oo ka baqaya in bulshada ka takoormaan haddiiba la ogaado in uu cudurkaasi hayo. Ururka qaramada midoobay ayaa cudurkani u aqoonsaday in uu yahay masiibo caalami ah. Dadaalo badan oo la sameeyayna waxa la dareemay in wixii ka danbeeyay sannadkii 2000 uu hoos u dhacday tirada dadka qaba cudurkan ee adduunka ku nooli.
Haddii aad rabto in aad ka qaybqaadato ololahan lacagta loogu ururinayo dadka qaba cudurka aydhiska ee adduunka dacaladiisa ku nool, waxa aad farriin sms ah ku soo diri kartaa nambarkan: 72 999, adiga oo soo qoraya xaddiga lacagta aad bixinayso, sida 50 kr, 100kr ama 200kr. Waxa aad sidoo kale dalban kartaa heesta ama fannaanka aad rabto in aad idaacadda ka maqasho.
Sidoo kale waxa aad lacagta si toos ah ugu shubi kartaa sanduuqa nambarkiisu yahay 90 1950-6. Wixii su’aalo ah ee mashruucan ku saabsanna waxa aad ku hagaajin kartaa iimaylka: musikhjalpen@sverigesradio.se
Xigasho: Musikhjälpen.se, SR